ड्रामा, यूरो भन्दा पहिले ग्रीक मुद्रा | Absolut यात्रा
ड्रामा, यूरो भन्दा पहिले ग्रीक मुद्रा
मारुउजेन | | ग्रीस
के तपाई नाटक सुन्नुभयो? निश्चित गर्नुहोस् तपाईंले गर्नुभयो, विशेष गरी यदि तपाईं years० बर्ष भन्दा माथिको हुनुहुन्छ र तपाईं युरोपमा बस्नुहुन्छ भने। को ड्राचम यो २०० Greece मा युरोको आगमन सम्म ग्रीसमा धेरै पटक प्रयोग गरिएको मुद्रा थियो। यसको धेरै लामो र चाखलाग्दो इतिहास छ र यो विश्वको सब भन्दा पुरानो मुद्रामा हुनुपर्दछ, त्यसैले आज हामी केही अध्यायहरू जान्ने छौं। यो यात्रा को।
नाटक हजारौं वर्ष पछि फिर्ता जान्छ, तर अलमल्लमा नहुनुहोस् किनकि यो लगातार प्रयोग गरिएको छैन। हो वास्तवमा, १ th औं शताब्दीको पहिलो आधाबाट तीन आधुनिक संस्करणहरू ड्रामाको देशमा देखा परेको छ, अन्तमा ग्रीस युरोपियन युनियनको हिस्सा बन्न पुगे र ब्लाकका बाँकी देशहरूसँग मुद्रा साझा गरे।
1 पुरानो नाटक
2 आधुनिक ड्रामा
हामी ड्रामाको कथा दुई मा विभाजन गर्न सक्छौं। प्राचीन समयमा ड्रामा र आधुनिक ड्रामा। नाम कहाँबाट आउँछ? यस्तो देखिन्छ कि सिक्काको नाम नै हातमा समाउन सकिने चीजसँग सम्बन्धित छ। drássomai, वा कम्तिमा त्यो हो जुन पुरानो ट्याब्लेटमा केही शिलालेखहरू, ई.पू. ११०० ईसापूर्वदेखि, जुन मुट्ठीभर छवटा धातु रडहरू (तामा, काँसा वा फलाम) लाई संदर्भित गरियो। ओबोलियो.
समय पछि पुरातन युनानीहरूद्वारा बनाइएको प्रायः सिक्काका लागि चाँदीको मानक भयो। पछि, प्रत्येक सिक्काको आफ्नै नाम भयो जुन यो एथेन्स वा कोरिन्थमा रहेकोमा निर्भर गर्दछ। हो, प्रत्येक शहरको यसको मुद्रा थियो यसको आफ्नै प्रतीकको साथ र ती दुवै बीचको समानता धातुको मात्रा र गुणबाट दिइयो जुन तिनीहरूसँग बनाइएको थियो।
पुरानो सहरहरुमा ड्रामा प्रयोग गरियो अलेक्जान्ड्रिया, कोरिन्थ, एफिसस, कोस, नेक्सोस, स्पार्टा, सिराकुज, ट्रोय र एथेन्स, अरू धेरैमा। ईसापूर्व XNUMXth औं शताब्दीको कुनै बेला एथेन्सको सिक्कालाई चार ड्राक्मा भनेर चिनिन्थ्यो व्यापक रूपमा चिनिन्थ्यो र प्रयोग गरिएको थियो। हामी अलेक्ज्याण्डर दिस्टको अगाडि कुरा गर्दैछौं।
प्रक्रियामा भाग लिने टकसालको आधारमा ड्रामामा विभिन्न तौलहरू मिसाइएको थियो। को मानकr, जे भए पनि, त्यो लोकप्रिय हुन समाप्त भयो, त्यो थियो 4.3 ग्राम, अटिका र एथेन्समा अधिक प्रयोग गरियो।
पछि, महान अलेक्ज्याण्डरको विजय र विजय संग हात मा, ड्रामा सीमा पार र यो विभिन्न हेलेनिक राज्यहरूमा प्रयोग भएको थियो। वास्तवमा, यो ज्ञात छ कि अरब मुद्रा, दिर्हाम, नाटकबाट यसको नाम हुन्छ। उही आर्मेनियाको मुद्रा हो, dram
जे होस् आज जान्नको लागि पुरानो ड्रामाको मूल्य एकदम गाह्रो छ (व्यापार, व्यापारिक वस्तु, अर्थव्यवस्था उस्तै छैन), कोहीले जोखिम लिन्छन् र भन्छन् कि एक 46.50th औं शताब्दी ई.पू. ड्राचमा २०१ 2015 को मानमा $ XNUMX को आसपास हुनेछ। त्यस पछाडि सत्य यो हो कि हालको मुद्राको रूपमा पनि उस्तै ड्रामाहरू जहिले पनि परिवारलाई बाँच्न वा सहयोग पुर्‍याउन आवश्यक थिएन।
फ्र्याक्सन र ड्राचमाको गुणा धेरै राज्यहरूमा टकसाल गरिएको थियो। उदाहरणका लागि, टोलेमीहरूको इजिप्टमा त्यहाँ थिए pentadrachmas y octadrachms। यसैले सारांशमा हामी यो भन्न सक्दछौं कि पुरानो चाँदीको ड्रामाको वजन 4.3..0.72 ग्रामको आसपास थियो (यद्यपि यो शहर-राज्यबाट शहर राज्यमा फरक पर्दछ)। यो ०.0.18२ ग्रामको छ वटा ओबोलमा विभाजन गरिएको थियो र ०.5 ग्रामको चार साना सिक्कामा व्यासमा and र mill मिलिमिटरको बीचमा विभाजित गरिएको थियो।
पुरानो ड्रामा, आफ्नो भव्य र शक्तिशाली नाम संग, १ 1832 century२ मा, १ XNUMX century२ मा ग्रीसको जीवनमा १ XNUMX century२ को पहिलो आधा ग्रीक जीवनमा पुन: प्रस्तुत गरिएको थियो। राज्यको स्थापनाको लगत्तै पछि। यसलाई १०० मा विभाजित गरिएको थियो लेप्टा, केही तामा र चाँदीको अरूहरू, र त्यहाँ २० बहुमूल्य सुनको सिक्का थियो जुन यस बहुमूल्य धातुको 20 ग्राम थियो।
सन्‌ १1868 मा ग्रीस ल्याटिन मौद्रिक संघमा सामेल हुन्छ, एक प्रणाली जुन एक सदस्यमा धेरै यूरोपीय मुद्रालाई एकीकृत गर्‍यो, सदस्य देशहरू द्वारा प्रयोग गरिएको थियो, र त्यो १ 1927 २ until सम्म प्रभावमा रह्यो। यो समूहमा सामेल भएदेखि। ड्राचमा तौल र फ्रेन्च फ्र्याकको मूल्यमा बराबर भयो।
तर यो ल्याटिन मौद्रिक संघ पहिलो युद्धमा पतन भयो र त्यो टकराव पछि नयाँ गणतन्त्र हेलेना, अन्य नयाँ सिक्का टकसाल गरिएको थियो। र टिकटलाई के भयो? ग्रीसको नेशनल बैंक द्वारा जारी नोटहरू १1841१ र १ 1928 २XNUMX बीचमा प्रसारित भयो र त्यसपछि ग्रीस बैंकले त्यसो गर्न जारी राख्यो १ 1928 2001 to देखि २०१ from सम्म त्यो क्षण जब यूरो दृश्यमा प्रवेश गर्दछ।
तर नाचमा १ th औं शताब्दीमा के थियो? एउटा सिक्का बोलाइयो फिनिक्स, जुन देशले ओटोम्यान साम्राज्यबाट स्वतन्त्र भएको केही समय पछि शुरू भएको हो। यो १1832२ मा हो कि फिनिक्सलाई ग्रीसका राजा ओटोको पहिलो पुतलाको राजाको पुतलाले सजाइएको ड्रामाले प्रतिस्थापन गर्यो।
जस्तो प्राय जसो मुद्रास्फीति भएको अवस्थामा हुन्छ, र ग्रीसको एकदम महत्त्वपूर्ण घटना भएको थियो, २० औं शताब्दीको दौडान, बृहत सम्प्रदायका साथ नोटहरू देखा पर्‍योs विशेष गरी WWII मा नाजीहरूको व्यवसायको समयमा।
तर यस प्रख्यात सिक्काको इतिहासलाई जारी राखेर हामी कुरा गर्न सक्दछौं दोस्रो आधुनिक ड्रामा जुन नाजीहरूको पतन पछि ठीक देखिन्छ। ग्रीस स्वतन्त्र भएपछि मुद्रास्फीति बढ्दो छ र कागजी मुद्रामा मात्र टक्राइन्छ, बढ्दो संख्याको।
१ 50 s० को दशकमा हामी आधुनिक ड्रामाको तेस्रो अवधिमा प्रवेश गरेका छौं, त्यहाँ मुद्राको अवमूल्यन र मूल्यांकन थियो र तल्लो मूल्यवर्ग बिलहरू प्रचलनबाट बाहिर गयो। विनिमय दर को दर मा रह्यो १ 30 1973 सम्ममा dra० नाटकहरू। यदि हामीसँग स्मृति छ भने, यो कम वा कम रूपमा तेल संकट आउँछ र वित्तीय अवस्था परिवर्तन हुन थाल्छ, ग्रीसमा मात्र होइन सम्पूर्ण विश्वमा।
अलि अलि गर्दै, अधिक र अधिक ड्रामामा एक डलर किन्न आवश्यक थियो र त्यसैले हामी आउँछौं २००१, जब ग्रीस युरोपेली संघमा सामेल हुन्छ र युरो द्वारा सप्लान्ट गरिएको ड्रामामा घुमाउन बन्द हुन्छ।
कथा जारी छ, विश्वले संकट, युनियन र विभाजनको सामना गर्न जारी छ, डलरले शासन गर्छ, युरो प्रतिस्पर्धा गर्छ, युआन झन् झन् बढी चम्किन्छ, त्यसैले कसैले पनि यो आश्वासन दिन सक्दैन कि एक दिन यूरोपेली संघ विघटन हुने छैन र ड्रामाले यसको बनाउने छ ग्रीस मा उपस्थिति। तिम्रो के बिचार छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: Absolut यात्रा » ड्रामा, यूरो भन्दा पहिले ग्रीक मुद्रा
सविता भाभी: भारतको सबैभन्दा लोकप्रिय र विवादास्पद हास्य पट्टी
क्यानाडाको हिउँ asonsतु